Cheap CNC igwe anaghị agba nchara akụkụ factory na suppliers | Ouzhan
Igwe anaghị agba nchara CNC egwe ọka-nkenke igwe anaghị agba nchara igwe akụkụ
Igwe anaghị agba nchara nwekwara ihe ndị dị ka Ni, Ti, Mn, N, Nb, Mo, Si na Cu. Igwe anaghị agba nchara nwere magburu onwe e ji mara ndị dị otú ahụ dị ka ike pụrụ iche, elu na-eyi ndị na-eguzogide, elu corrosion eguzogide na-eguzogide nchara. Ya mere, ọ na ọtụtụ-eji ụlọ ọrụ, nri ígwè, electromechanical ụlọ ọrụ, ezinụlọ ngwa oru ụlọ ọrụ na n'ụlọ mma, gụchara ụlọ ọrụ. Ngwa na mmepe atụmanya nke igwe anaghị agba nchara ga-abawanye ma buru ibu, mana ngwa na mmepe nke igwe anaghị agba bụ n'ụzọ ka ukwuu kpebisiri ike site ogo ogo teknụzụ ọgwụgwọ ya.
Uru nke Ouzhan anaghị agba nchara milled akụkụ
OEM ahaziri igwe anaghị agba nchara igwe ọrụ-China Shanghai CNC igwe anaghị agba nchara igwe akụkụ igwe ihe
Ouzhan bụ onye nrụpụta na - agbakwunye ụlọ ọrụ na azụmaahịa, na - enye ọrụ ndozi ntụgharị na igwe nhazi igwe. Dị ka ndị ahịa chọrọ, ọ nwere ike hazie igwe anaghị agba nchara na anụ pụrụ ịdabere na elu-nkenke CNC-egwe ọka. A na-arụpụta akụkụ igwe ndị a site na iji akụrụngwa kachasị mma, nke a na-enweta site na ndị na-ebubata ngwa ahịa a ma ama. Anyị ike na ọkachamara oru otu na oru oma management na ime ihe na usoro nwere ike hụ na zuru okè n'ichepụta nke igwe anaghị agba nchara igwe igwe. Ke adianade do, na CNC milled igwe anaghị agba nchara ngwaahịa nyere erube nnọọ eru ogo ụkpụrụ na ike ga-eji dị iche iche ulo oru ngwa. Na anyị nwere ike inye mpi ọrụ maka igwe anaghị agba nchara CNC-egwe ọka ngwaahịa na anyị kpọrọ ahịa.
Gịnị bụ ojiji nke igwe anaghị agba nchara milled akụkụ
1. Austenitic anaghị agba nchara milled akụkụ nwere saa mbara ma dị mma keukwu arụmọrụ, na na ọtụtụ-eji nri, general chemical akụrụngwa, na atọm ike;
2. Ferritic igwe anaghị agba nchara milled akụkụ, ọtụtụ-eji pitting na-eguzogide ihe;
3. Martensitic anaghị agba nchara milled akụkụ, ọtụtụ-eji na akụrụngwa na-eguzogide ọgwụ na igirigi ibu sulphuric acid, phosphoric acid, formic acid, na acetic acid;
4. Chromium-nickel-molybdenum igwe anaghị agba nchara igwe nri, nke a na-ejikarị eme mmanụ, fatịlaịza, akwụkwọ, mmanụ, kemịkal na ụlọ ọrụ ndị ọzọ iji rụpụta ndị na-agbanwe ọkụ na ndị condensers.
Uru nke igwe igwe anaghị agba nchara Ouzhan
- All nkenke CNC milled igwe anaghị agba nchara ngwaahịa bụ isiokwu siri ike mma nnyocha.
- Dịka eserese ma ọ bụ ihe atụ iji rụpụta akụkụ igwe anaghị agba nchara.
- Ouzhan nwere ihe karịrị igwe nhazi, ọrụ ndị agbakwunyere, usoro mmepụta ihe, wee jiri asambodo ihe onwunwe na akụkọ nyocha ngwaahịa.
Nke gara aga: Nhicha aluminom alloy ụzọ na windo nhazi akụkụ
Osote: Ahaziri igwe anaghị agba nchara igwe akụkụ nhazi igwe
Omenala egbu maramara ọla-egwe ọka akụkụ machining a ...
Ahaziri electroplated ọla-egwe ọka akụkụ pr ...